भोलिबाट अस्त अवस्थामा शुक्र: यी ३ राशिलाई अत्यन्त शुभ, कुन-कुन ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलिबाट अस्त अवस्थामा शुक्र: यी ३ राशिलाई अत्यन्त शुभ, कुन-कुन ?
भोलिबाट अस्त अवस्थामा शुक्र: यी ३ राशिलाई अत्यन्त शुभ, कुन-कुन ?
admin January 4, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 376 Views
ग्रहहरूको राशि परिवर्तन बाहेक, तिनीहरूको स्थितिमा भएका साना-ठूला परिवर्तनहरूले पनि हाम्रो जीवनलाई असर गर्छ। यदि त्यो ग्रह महत्त्वपूर्ण ग्रह हो भने यसको प्रभाव बढी रहन्छ। शुक्र भौतिक सुख, सौन्दर्य, वैवाहिक जीवन, व्यापारमा असर गर्ने ग्रह हो। शुक्र ग्रहको अवस्था परिवर्तनले जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्छ। जब कुनै ग्रहले सूर्यसँग मिलेर यस्तो चिन्हमा पुग्छ, जहाँ त्यसको चमक घट्छ, त्यसलाई ज्योतिषशास्त्रमा ग्रह अस्त भनिन्छ। भोलि अर्थात ४ जनवरी २०२२ देखि शुक्र ग्रह अस्ताउँदैछ र यसलाई अशुभ मानिएको छ। तर यो अवस्थामा पनि शुक्र ३ राशिका मानिसको लागि निकै शुभ साबित हुनेछ। कुन-कुन राशि हुन् त?
मिथुन राशिका लागि शुक्रको अस्ताउने चरण फलदायी रहनेछ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरुलाई कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । यसका साथै कार्यक्षेत्रमा उच्च अधिकारीहरूले तपाईंको कामको प्रशंसा गर्नेछन्। मिथुन राशिका व्यक्तिहरु व्यवसायसँग जोडिएका छन् भने जनवरी ४ बाट लाभ हुने सम्भावना छ । आर्थिक जीवनको बारेमा कुरा गर्दा तपाईंले यो समयमा खुब पैसा बचत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। मिहिनेतका कारण आर्थिक उन्नतिको बाटो खुल्नेछ।
कन्या राशिका व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गर्दा, शुक्र यस राशिको चौथो घरमा बस्नेछ, जसले उनीहरूको लागि शुभ फल दिनेछ। कन्या राशि भएका व्यक्तिहरुको परिश्रमको शुभ फल मिल्ने सम्भावना छ। केही नयाँ साथीहरू बन्ने सम्भावना पनि छ। कार्यस्थलमा तपाईंको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहनेछ। जागिरमा पदोन्नतिको सम्भावना पनि देखिन्छ। यस अवधिमा आम्दानीमा वृद्धि हुने प्रबल सम्भावना छ। तपाईं सजिलै पैसा बचत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
कुम्भ राशिका मानिसहरुको लागि शुक्रको यो स्थितिले जीवनमा सफलता दिलाउनेछ। शुक्र ग्रहको समय तपाईंको लागि धेरै भाग्यशाली साबित हुन सक्छ। करियरको बारेमा कुरा गर्दा, रोजगारदाताहरूले नयाँ कामको अवसर प्राप्त गर्नेछन्। कार्यालयमा तपाईंको कामको प्रशंसा हुनेछ र तपाईंलाई सफलता पनि मिल्नेछ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरू जो व्यवसायी हुन्, यो स्थिति शुभ रहँदा उच्च लाभ हुनेछ।
Previous पाइलटले विमानमा गरेको घोषणा सुनेर उडानमा रहेकी एक युवती लाजले भुतुक्कै भएको भिडियो बन्यो चर्चित
Next यसरी कमाउँछिन यी युवतीले घ ण्टाकै १२ लाख